Ra’isalwasaaraha Itoobiya oo shaaciyey xiliga ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya – SBC
Ra’isalwasaaraha Itoobiya oo shaaciyey xiliga ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya
Posted by editor on Janaayo 29, 2012 Comments
Ra’isalwasaaraha Meles Zenawi ayaa daboolka ka qaaday in ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gobolo ka tirsan Soomaaliya si deg deg ah uga baxayaan.
Zenawi oo magaalada Adis Ababa saxafiyiinta kula hadley ayaa sheegay in ciidamadiisu diyaar u yihiin inay dib uga soo baxaan Soomaaliya sida ugu dhakhsiyaha badan taasi oo ku ku imaanaysa marka ugu horeysa ee ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM ay awood u helaan inay xaalada gacanta ku qabtaan.
“Waxaynu rajeynaynaa in ciidamada AMISOM ay awood u yeeshaan inay na badalaan, inta aynu bixin” ayuu yiri Meles Zenawi
Hadalka ka soo yeeray Ra’isalwasaaraha Itoobiya ayaa ah kii ugu horeeyey ee xukuumada Adis Ababa ay si buuxda ugu qirato in ay ciidamo kaga sugan yihiin cariga Soomaaliya.
Itoobiya ayaa bishii October ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxay ciidamu u dirtey Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalada ka dhanka ah xoogaga Shabaabka ee badi gacanta ku haya gobolada Koonfurta iyo Waqooyiga dalka.
Bishii hore ee December, ciidamada Itoobiyaanka oo garabsiinaya maleeshiyaad taabacsan dawlada KMG ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada muhiimka ah ee Baladweyne taasi oo horey u maamuli jireen Al-Shabaab.
Maalinimadii Talaabada qof isku soo rakibay waxyaabaha qarxya ayaa isku qaxriyey saldhig ciidamada Itoobiyaanku ku leeyihiin magaalada Baladweyne, waxaana xoogaga Shabaabku ay sheegteen in hawlgalkaasi ay ku dileen 33 askari oo ay ka mid yihiin afar sarkaal oo sar sare, balse xukuumada Itoobiya ilaa iyo hada dhacdadaasi dibnaha ayay ka daboolatey.
Faragalinta ciidan ee Itoobiya ayaa soo taxndey mudooyinkii ugu dambeeyey sanadkii 2006-kii, ciidamo Itoobiyaan ah oo taageeraya xukuumadii uu madaxweynaha ka ahaa Col. C/laahi Yuusuf ayaa dagaal culus la galey xoogagii maxkamadihii Islaamiga oo ay ka qabsadeen goobo badan oo ay ka mid tahay caasimada Muqdisho, waxaase ay dib uga baxeen Itoobiyaanku Soomaaliya sadex sano ka dib.